စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅ ) ( ငမွဲ ငဖျင်း ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅ ) ( ငမွဲ ငဖျင်း )
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅ ) ( ငမွဲ ငဖျင်း )
Posted by Foreign Resident on Jan 16, 2012 in Think Different | 35 comments
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( အဆဲခံချင်လို့ကိုရေးတယ် ( ၅ ) )
” မြန်မာပြည်မှာ ရောင်းစရာများကျန်သေးလား ”
ဆိုတဲ့ Post ဖတ်ရင်း
အဘ တွေးမိတာလေးတွေပါကွယ် ။
” အဲ့ဒီလို ဟိုတယ်တွေ ဆောက်ရင်ရော ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအတွက် ဘာအကျိုးရှိနိုင်မလဲ..
ကျွန်တော်တို့လည်း သွားရောက်တည်းနိုင်တဲ့ နှုန်းထားရှိပါသလား “
( ၁ ) အဲ့ဒီလို ဟိုတယ်တွေ ဆောက်ရင် အနဲဆုံး အခွန်အခတွေ နိုင်ငံတော်က ရတာပေါ့ကွယ် ။
( ၂ ) ကံကောင်းရင် မြန်မာလူမျိုးတွေ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့် အတတ်ပညာတွေလဲ ရဦးမှာ ။
( ၃ ) ဟိုတယ် ပါတ်ဝန်းကျင်ဒေသရဲ့ Infra-structure တွေလည်း ကျွဲကူးရေပါ မြင့်လာဦးမှာ ။
( ၄ ) ပိုက်ဆံ လာပေး / ဖြုံးမယ့် နိုင်ငံခြားသားတွေကိုလည်း ဆွဲဆောင်မှု တစ်ခုဖြစ်ဦးမှာလေ ။
( ၅ ) နောက်ပြီးတော့ ဒီဟိုတယ် အဆောက်အဦးကြီးက မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေ ကျန်နေခဲ့မှာလေ ။
” ကျွန်တော်တို့ တည်းနိုင်တဲ့ နှုန်းထားရှိပါသလား ” ဆိုတာနှင့်ပါတ်သက်လို့ကတော့
မွဲတဲ့သူတွေဟာ ပါလီမန်ခေတ် မဆလခေတ် နဝတခေတ် ဒီမိုကရေစီခေတ် ဘယ်ခေတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်
ဈေးကြီး ဟိုတယ်တွေမှာ မတည်းနိုင်ပါဘူးကွယ် ။ တန်ရာ တန်ရာ မှာနေရတာပေါ့ကွယ် ။
အေး အဲဒီ ဟိုတယ်တွေက အဖြူမှပေးတည်းတယ်
လူမျိုးရေး ခွဲခြားပြီး စည်းကမ်းထုတ်ထားရင်တော့
အဘကိုယ်တိုင် လမ်းပေါ်တက်ပြီး ကန့်ကွက် ပေးပါ့မယ်ကွယ် ။
ဥပဒေ စည်းကမ်းတွေကို မှန်မှန် ကန်ကန် လိုက်နာမယ်
အခွန်အခ တွေ မှန်မှန် ကန်ကန် ပေးဆောင်မယ် ဆိုလို့ကတော့
လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲကို ကြိုဆိုရမယ့် ကိစ္စပါကွယ် ။
ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းတာကတော့ ၊ အဘ အထင်ပါ ၊
မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ မဆလခေတ်ကြီးမှာ နှစ်ရှည်လများ ပုံသွင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်
ဆိုရှယ်လစ် ဆန်ဆန် အတွေးအခေါ်တွေ လွှမ်းမိုးခံနေရပါသေးတယ် ။
ဒီမိုကရေစီခေတ်ဆိုတာ ပဒေသာပင်ပေါက်တာ မဟုတ်ပါဘူး ။
လူတွေကို လွတ်လပ်စွာ ပြောဆို ရေးသားခွင့်
လူအချင်းချင်း အခွင့်အရေး တန်းတူ ညီမျှခွင့် နှင့်
ပြည်သူ အများစုမှ အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့် စတာတွေကိုပဲ ပေးတာပါ ။
လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အရည်အချင်း ( ကံတရား လည်းပါတာပေါ့လေ ) ပေါ်မူတည်ပြီး
ဆင်းရဲ ချမ်းသာ ကတော့ သိသိသာသာကို ကွဲပြားနေဦးမှာပါ ။
ဘာမှမပူနှင့် သိပ်မကြာခင်မှာ ဆင်းရဲလို့ ဆေးမကုနိုင်လို့
သေရတဲ့သူတွေ အောတိုက် အများကြီးကို တွေ့ရဦးမှာ ။
လူအချင်းချင်း ဆင်းရဲ ချမ်းသာ တန်းတူ ဖြစ်စေမယ့် စနစ်ကို လိုချင်ရင်တော့
ဆိုရှယ်လစ် ဒါမှမဟုတ် ကွန်မြူနစ် စနစ်ကို တောင်းဆိုတာက ပိုကောင်းပါတယ်ကွယ် ။
( တန်းတူညီမျှ တတန်းတစားတည်း ညီညီ ညာညာ မွဲ ကြတာလေ )
လက်ရှိ အခြေအနေမှာ တိုင်းပြည်ဟာ မွဲပြာကျနေတယ် ။
အစိုးရ အဆက်ဆက် ဝါဒဖြန့်ခဲ့တဲ့
သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝတဲ့ ရွှေနိုင်ငံဆိုတာကြီးကိုလည်း
အဘ လုံးဝ အယုံအကြည်မရှိပါဘူး ။
ဘယ်သယံဇာတတွေကများ ဆော်ဒီတို့ ဘရူနိုင်းတို့ သြဇီတို့ နော်ဝေတို့ လို
တိုင်းသူပြည်သား သန်း ၆၀ လောက် မှီခိုစားရလောက်အောင်
လောက်လောက်လားလား ထွက်လို့လည်း ။
ဟိုဟာ တို့စိတို့စိ ဒီဟာ တို့စိတို့စိ မစို့မပို့လေး ထွက်တာကိုများ ။
အဲဒီတော့ကာ ငမွဲတိုင်းပြည်ကြီး အမြန်ဆုံး ဖွံဖြိုးတိုးတက်ဖို့က
ငွေ ( ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ) လိုတယ် ။ ဖိတ်ခေါ် ကြိုဆိုရမယ် ။
အစပိုင်းမှာတော့ ပါတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုတွေ ၊
ယဉ်ကျေးမှုတွေ ထိတ်တိုက်တွေ့မှုတွေ ( Idea & Culture Shock ) ရှိမှာပဲ ။
မတတ်နိုင်ဘူး လောလောဆယ်တော့ ချမ်းသာအောင် အရင်လုပ်ရမှာပဲ ။
တိုင်းပြည်ချမ်းသာလာမှ ဥပဒေတွေ ထပ်ထုတ်ပေါ့ ။
( ဂျပန် နှင့် တရုတ်ကြီး လည်း ဒီလမ်းကြောင်း အတိုင်း တက်လာရတာပဲ )
” ပြည်သူပြည်သားများဟာ မြင်သာမြင်ရပြီး မကြင်ရတဲ့ဘ၀ဖြစ်နေတာ တော်တော်ကိုဆိုးပါတယ် “
အဘလည်း စိတ်မကောင်းဘူး ။ ဟုတ်တယ် ။
( ၁ ) သံလွင် မြစ်ကို ယိုးဒယား နှင့် တရုတ် တဝက်စီ
( ၂ ) ဧရာဝတီမြစ်ကို တရုတ် သီးသန့်
( ၃ ) ချင်းတွင်းမြစ်ကို ကုလား သီးသန့် ( စီစဉ်နေပြီ )
လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်ဖို့ ၊ ရရင် သူတို့နိုင်ငံကိုရောင်းဖို့ ၊ လက်ခံလိုက်ရတယ် ။
( ၄ ) မုတ္တမ ပင်လယ်အော်က Gas ကို ယိုးဒယား ကို
( ၅ ) ရခိုင်က Gas ကို တရုတ် ကို
ရောင်းပေးနေရတယ် ။ မြန်မာက သုံးရတယ်ကိုမရှိဘူး ။
အဘတို့နိုင်ငံလို ပိုက်ဆံမရှိတဲ့ ငမွဲ နိုင်ငံ ၊
နည်းပညာမတတ်တဲ့ ငဖျင်း နိုင်ငံ အတွက် ၊
ဒီနည်းလမ်းအပြင် ဘာနည်းလမ်းများ ရှိလို့တုန်း ။
နိုင်ငံတော် သမ္မတ နေရာကပဲ ဝင်စဉ်းစားကြည့်ပါအုန်း ။
အခုတောင်မှ ပြည်ထောင်စု အစိုးရကော ၊
ပြည်နယ် နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရတွေကော ၊
အကုန်လုံး ဘတ်ဂျက် လိုငွေ အကြီးအကျယ် ပြနေလို့
ဘာဆက်လုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်နေတာ ။
ဒီလိုသာ နှစ်စဉ် ဘတ်ဂျက် လိုငွေ အကြီးအကျယ် ပြနေလို့ကတော့
နောက်ဆို မြစ်တွေ Gas တွေနှင့်တင် မကဘူး ၊ လူပါထိုးဆပ်ရမှာ ။
အေး ချုပ်ဆိုတဲ့ သဘောတူ စာချုပ်တွေကသာ
သိသိသာသာ ပွင့်လင်းဖို့ ( Transparency ) ၊ ကြားလူပွဲစား ဝင်မစားဖို့ ၊
အဂတိ ကင်းစင်ဖို့ ၊ မြန်မာနိုင်ငံဖက်က ပက်ပက်စက်စက် မနစ်နာဖို့သာ လိုတာ ။
နဲနဲ ပါးပါး နစ်နာဖို့က မျော်လင့်ပြီးသား ၊
ဘယ် ကုမ္ပဏီကမှ သူတို့ ရှုံးမယ့် နစ်နာမယ့် စာချုပ် လာမချုပ်ဘူး ။
မနစ်နာချင်ရင် ၊ ကိုယ်တတ်တယ်ထင်ရင် ၊ ကိုယ့်ဖာသာလုပ် ။
ကဲ တော်သေးဘီ ။
သူကြီးက မဆဲရ ဆိုလို့သာ မဆဲမယ် ၊
စိတ်ထဲမှာတော့ ကျိန်ဆဲနေလောက်ပြီ ။
အမှန်ကိုရော ၊ အမှားကိုရော ထင်ထင်ရှားရှား မြင်နိုင်ကြပါစေကွယ် ။
အဘကတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြတ်ပြတ် သားသား ဝန်ခံလိုက်တယ် ။
ပိုက်ဆံမရှိတဲ့ ငမွဲ ၊ နည်းပညာမတတ်တဲ့ ငဖျင်း ၊ နိုင်ငံက နိုင်ငံသားလေး ၊
>>>ဒီလိုသာ နှစ်စဉ် ဘတ်ဂျက် လိုငွေ အကြီးအကျယ် ပြနေလို့ကတော့
ခုလည်း လူထိုးဆပ်နေရပါပြီ အဘဖော ရယ်….
တိုင်းတပါးသား ထားရာနေ စေရာသွား ပေးတာယူ ကျွေးတာစား…
ဒါနှင့် ကိုရင် အင်ဇာဂီ ရဲ့
ဘယ့်နှယ် အင်ဇာဂီ ကနေ စိန်ဇာဂီ ဖြစ်သွားရပြန်သတုံး ။
Avatar ကလည်း သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ပုံ နှင့် ဆိုတော့ …
မဟုတ်မှ လွဲရော ကိုရင် …
စိန်စိန့် စေတနာ ခုရုမာ(車) နှစ် ၃၀ ဆို ကျိုပလိုက်ပါ…
စိန်စိန့် အကြင်နာ မြစ်ဧရာ ..လူထုအသံကို နားထောင်တာ ..
စိန်စိန့် မေတ္တာစင်္ကြာဝဠာ အဝေးရောက်တွေဆို အခွန်မယူပါ…
စိန်စိန့် ဂရုဏာ လူခြောက်ရာ ၄၀၁နဲ့ လွှတ်လိုက်ပါ…
ချိန်းဂျင်း ဆမ်းမသင်း ဟာ ..ချိန်းဂျင်း နာ့သင်း ထက်တော့ အပုံကြီး သာတာတမုံ့…
၁၃-၁-၂၀၁၂ မှ စ၍ ၁ပါတ် တိတိ
အနော်လဲ ဂုဏ်ပြုထားပါတယ် …
စိန် ပေတော့ စိန်ဂီဂီ ရေ
ပို့စ်လေးအတွက်.. ကျေးဇူး (အမြောက်၁သိန်း) တင်ပါတယ်ကွယ်…။
ထေက်ပြချင်တာ.. အပေါ်မှာကုတ်လိုက်တဲ့… တခုပါပဲ..
မြန်မာတွေ.. ဒီလိုတွေးခေါ်စဉ်းစားကြတာ…သက်ဦးဆံပိုင်… စစ်ကြို..စစ်ပြီး(အင်္ဂလိပ်လက်အောက်).. လွတ်လပ်ပြီးပါလီမန်ခေတ်.. မဆလ..စစ်အာဏာရှင်ခေတ်ထဲမှ မဟုတ်ပါဘူး..။
ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာနေကြလည်း… မြန်မာဟာ.. မြန်မာပါပဲ..။
ပြင်သစ်က.. နိုင်ငံအမြင့်ဆုံးပေးတဲ့ ဆုအခန်းအနားမှာ… အမေရိကကရောက်ကိုကြောင်ကြီးက…. အဲလိုမြင်တယ်..။ ရေးတယ်.. ဖွတယ်..
လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်/ယုံကြည်ချက်ကြောင့်… အမေရိကမှာ ပျံလွန်တော်မူခဲ့တဲ့… မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့တူတူ (အဲဒီခေတ်က) သပိတ်မှောက်ကံဆောင်ခဲ့ဖူးတဲ့.. ဆရာတော်တပါးကို.. မဟနနဲ့ပေါင်းပြီး.. အငြိုးနဲ့.. ထောင်အကြမ်ကြိမ်ချတယ်….။
ကဲ.. အခုလေးတင်လည်း မြန်မာမြန်မာချင်းချ(ရူးသတ္တိပြ)တဲ့.. မလေးရှားကသတင်းတခုတက်လာပြန်ပါပြီ..
ယူအက်စ်ရဲ့.. မြန်မာအနေများတဲ့ဒေသတွေမှာလည်း.. အမေရိကန်တွေဥာဏ်မမှီတဲ့.. အမှုအစုံ.. အမြဲတန်းဖြစ်နေကြတယ်..။
သိန်းဂဏန်း၂ခုလောက်လူဦးရေလေးမှာ.. အက်ဘီအိုင်က.. အထူးစောင့်ကြည့်ရတဲ့အထိ.. မြန်မာဟာ….မြန်မာဖြစ်နေတယ်..။
စံနစ်ကြောင့်..နိုင်ငံရေးစံနစ်ကြောင့် မဟုတ်ရပါဘူး…။ နိုင်ငံရေးစံနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဖူးဆိုတာကို.. … ကမ္ဘာ့အနှံ့.. စံနစ်မျိုးစုံအောက်.. နေထိုင်နေကြတဲ့… မြန်မာတွေ လက်တွေ့ကျကျ ပြနေပါတယ်…။
If it is not by the Political System,
It can be based on the Education System of Myanmar.Right?
Can we high light on the Myanmar’s education system?
Because the persons who create the problems at various location were come out from Myanmar Education system which so many changes in decade.
This isaview from another point.
မ Swal Taw Ywet ရေ
kai says: ” စံနစ်ကြောင့်..နိုင်ငံရေးစံနစ်ကြောင့် မဟုတ်ရပါဘူး ”
သူကြီးက စံနစ်ထက် လူမျိုးကို ပိုပြီး အပြစ်ပြောချင်နေပုံရတယ် ။
အဘ အထင်တော့ သူကြီးက
ဘာသာရေးကိုပါ အပြစ်ပြောချင်နေပုံရတယ်ကွယ့် ( အထင် ) ။
ရန်ကုန်မှာ ဆီဒိုနား လာဆောက်တဲ့ ၁၉၉၄ ပါတ်ဝန်းကျင်က ဆောက်လုပ်ရေးမှာ လူ ရာချီပြီး အလုပ်ရခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ့က အတွေ့ အကြုံများနဲ့ တော်တော်များများ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်အကိုင်တွေရကြပါတယ် ။
လာဆောက်တဲ့ အခါ ၀ိုင်းဝန်းခိုးကြတဲ့ အတွက် ရာထားတဲ့ ဘတ်ဂျတ် သန်း ၈၀ ကျော်ပြီး သန်း ၁၀၀ ကျော်ကုန်သွားပါတယ် ။ အနီးက လ္ဘက်ရည်ဆိုင် ။ သူခိုးလက်ခံဆိုင်များ ကားပိုင်ရှင်များ၊ ချမ်းသာသူများဖြစ်သွားပါတယ် ။
၁၉၉၆ ဆောက်လုပ်ရေးပြီးတော့ဟိုတယ် ၀န်ထမ်း ၇၀၀ ကျော် အလုပ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အကပ်ကြောင့်၊လူကြီးသားသမီးဖြစ်လို့ ရတဲ့ လူ မရှိသလောက်နည်းပါတယ် ။ သတင်းစာကခေါ်ပြီး အရည်အချင်းရှိသူများကို နိုင်ငံခြားသားများကိုယ်တိုင် စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။
၁၉၉၇ အာရှ စီးပွားရေး အကြပ်အတည်းရယ် ၊ sanction ရယ်ကြောင့် လူ ၃၀၀ ကျော်ပြန်ဖြုတ်လိုက်ရပါတယ်။
ဆီဒိုနားဝန်ထမ်းများဟာ ယခု နိုင်ငံတကာနဲ့ ပြည်တွင်းဟိုတယ် များမှာ ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်နေကြပါပြီ။ ဒါ ဆီဒိုနားတစ်ခုထဲကိုပြောတာပါ။
ဘယ်ဟိုတယ်ကမှ မြန်မာမို့လို့ ပေးမတည်းတာ မရှိပါဘူး ။
ပေးမတည်းချင်တာ သာရှိပါတယ် ။
ဘာဖြစ်လို့ပေးမတည်းချင်တာလည်းဆိုတော့ အများစုက ( အများစုနော် ၊အားလုံးကို မဆိုလိုပါ) ထုံးစံ အတိုင်းစည်းကမ်း မရှိတာ၊ အနိုင်ကျင့်ချင်ကြတာကြောင့်ပါ။ ကွမ်းစားပြီး ထွေးချင်တဲ့ နေရာမှာ ထွေးတတ်သလို ၊ ဆေးလိပ်မသောက်ရ စာတန်းချိတ်ထားလည်း သောက်ပါတယ် ။ သွားပြောရင် သောက်တော့ဘာဖြစ်လည်း ပိုက်ဆံပေးနေတာ အလကားနေတာ မဟုတ်ဘူး ။ ဒါ အိမ်မဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး ဂရုမစိုက်လုပ်ချင်ရာလုပ်ကြပါတယ်။
အနေအထိုင် ညစ်ပါတ်ကျသလို ငါပိုက်ဆံ ပေးနေတာ . ငါလုပ်ချင်တာလုပ်မယ်၊ တန်အောင်လုပ်ပစ်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ် အပြည့်နဲ့ လုပ်ကြပါတယ် ။ အရက်မှုးနေရင် မှုးနေလို့ဆိုပြီး ပိုဆိုးကြပါတယ်။
ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေကို အိမ်ဖော်သဘောမျိုးနဲ့ ဆက်ဆံကြတာ၊ ယောင်္ကျားသားကြီးများကလည်း ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးများကို ရမလားဆိုပြီး စမ်းကြတာ အလွန်များတဲ့ အတွက် မြန်မာ ဆိုရင် လက်မခံချင်တာတော့ ရှိပါတယ် ။ ကြောက်ကြပါတယ် ။
ဟိုတယ် SPA အသန့် ကကောင်မလေးများဆိုရင်လည်း မြန်မာတွေနဲ့ ၀င်ရမှာ အလွန်ကြောက်ကြပါတယ် ။ နိုင်ငံခြားသားတွေက စည်းရှိပြီး မြန်မာအများစုက စည်းမရှိ၊ဆွဲလားလွဲလားလုပ်ကြလို့ပါ။
ဘဖော ပြောသလို “အမှန်ကိုရော ၊ အမှားကိုရော ထင်ထင်ရှားရှား မြင်နိုင်ကြပါစေ” ။
ရွာထဲက ဒီမိုချစ်သူတွေလဲ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးပေးပါအုံး …အဲအဲ သူကြီးကွန့်မန်းလေးပါ ဖတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်…
အနာပေါ်ဒုတ်ကျသလိုဖြစ်ရင်တော့ ဆဲချင်စိတ်ပေါက်ချင်ပေါက်လာကြမှာ …
နိုင်ငံတော်အစိုးရက ၂၀၁၂ ကစပြီး ၀န်ကြီးဌာနအားလုံးရဲ့ ဘတ်ဂျတ်တွေကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှာသုံးတဲ့စနစ် စတင်ကျင့်သုံးနေပါပြီ။ အစိုးရပိုင်လုပ်ငန်းတွေအားလုံး ကုမ္ပဏီဆန်ဆန် ၀င်ငွေရအောင်ရှာပြီး ၀န်ထမ်းလစာ၊ ပင်စင်လစာအပြင် အစိုးရကို ၀င်ငွေရှာပေးနေရတယ်။ အစိုးရက လုပ်ပိုင်ခွင့်ပဲပေးထားပြီး အခွန်စားတဲ့သဘောပေါ့ … အဲဒီကရတဲ့ ၀င်ငွေနဲ့ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးစတဲ့ နေရာတွေမှာ ပြန်သုံးရတယ်လို့ မိန့်ခွန်းတစ်ခုမှာ ကြားခဲ့ဖူးတယ် … အမြတ်များများကျန်အောင် မလုပ်နိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ဖက်စပ်လုပ်ပစ်တယ် … တချို့ကို ပုဂ္ဂလိကလုပ်ပစ်တယ် … အစိုးရအနေနဲ့ အဲဒီလုပ်ငန်းတွေကနေ ၀င်ငွေရဖို့က အဓိကဖြစ်နေတယ် … ရနိုင်သမျှ နည်းလမ်းမျိုးစုံသုံးပြီး ရှာနေပြီး လူမှုရေးကဏ္ဍတွေမှာ ပြန်သုံးရင်းနဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကိုလဲ လျော့ချပေးနိုင်မယ့် အစီအစဉ်တွေ လုပ်နေပါတယ်လို့ ပြောတာပဲ ….
ကျနော်လဲ အဲ့ဒီလိုမြင်တယ် အဲ့ဒီပေါကြွယ်ဝတဲ့သယံဇာတဘာညာသရကာတွေ
အဘပြောသလို လူတုံးတွေကလဲ ဒါတွေကို အဟုတ်ကြီးထင်ပီး စွဲလန်းနေကြတယ်။
၁၀ တန်းတုန်းက ဆရာတစ်ယောက်ပြောဖူးတာလေးမှတ်ထားတာ ရှိတယ်
“မြန်မာတွေကျွန်းတစ်ပင်သုံးဖို့ နှစ်သုံးဆယ်လောက်ထိုင်စောင့်နေတဲ့ အချိန်မှာ Honda Company က တစ်နာရီကားအစီးပေါင်း ဘယ်လောက်ထုတ်ပီးနေပီလဲ မသိလိုက်ကြဘူးထင်တယ်” တဲ့။
ကျနော်က အဘရဲ့ ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ စီရီးတွေအားလုံးနီးပါး ကြိုက်တယ်ဗျာ…..
I saw in TV, Discovery channel, Title = Factory City.
China Industrial zone.
The production rate for an Electic Iron is only 15 Second / Piece.
It meant 1 minute =4Electric Irons,
240 Electric Irons in an hour.
They use the Electricity that was imported from Myanmar.
Myanmar need to import their low quality products.
How can we try our best when all of our resourse were sold?
အဘလို လူမျိုးတောင် ဒီလိုပြောနေမှာတော့
ဆိုတော့ကာ ကျွန်တော်တို့ အဲဒါတွေ ကို တစ်ကယ်ပဲရနေပြီလား ? ဘယ်လောက်ရလို့ ဘာတွေညီမျှနေပြီလဲ ဘာတွေကျန်နေသေးလဲ…။ အားလုံးဝိုင်းတွန်းဖို့ ညီညာဖို့တစ် ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တစ်ဖွဲ့နဲ့ တစ်ဖွဲ့ အပေးအယူ အချိတ်အဆက် မိမိ လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ တွန်းအားတစ်ခုတော့ လိုနေပြီ အဘရေ………… ။ ကိုယ်ရေး ကြုံတော့ သက်လုံကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားမှာ ……..ကိုယ်ရေးကြုံတာ မကြုံ တာထက် ကိုယ့်အမျိုးသားရေးအတွက် သက်လုံကောင်းသင့်တယ်လို့ ထင်တယ်လေ………….
၀င်ပြောချင်တာတွေက အရမ်းများနေတော့ ကိုဖေါရင်းပြောတဲ့ –
“အေး အဲဒီ ဟိုတယ်တွေက အဖြူမှပေးတည်းတယ်
လူမျိုးရေး ခွဲခြားပြီး စည်းကမ်းထုတ်ထားရင်တော့..”
“ဘာဖြစ်လို့ပေးမတည်းချင်တာလည်းဆိုတော့ အများစုက ( အများစုနော် ၊အားလုံးကို မဆိုလိုပါ) ထုံးစံ အတိုင်းစည်းကမ်း မရှိတာ၊ အနိုင်ကျင့်ချင်ကြတာကြောင့်ပါ။ ”
ကျုပ်တို့လူမျိုးက မြန်မာတွေကို ခွဲခြားတယ် နှိမ်တယ် မလိုလားဘူးလို့ ထင်ကြတယ်။ အဲဒါမှန်ပါတယ်။ အကြောင်းမဲ့မှန်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းရှိပါတယ်။
-အခြေအနေပေးတဲ့နေရာတိုင်းမှာ အရှိန်အ၀ါပြ အကောင်လုပ် ကြွားဝါချင်တယ်။
ဒါတွေကြောင့်လဲ ဒီစရိုက်ဆိုးတွေ မရှိတဲ့ မြန်မာလူမျိုးလူကောင်းလူနည်းစုဟာလဲ လူမျိုးရေးကျိန်စာသင့်ပြီး ရောပြီး အထင်သေးခံ အခွဲခြားခံ ကြရပါတယ်။
ကိုယ်တိုင် service လုပ်ငန်းလုပ်ကြည့်ရင် ( ရွေးစရာလဲရှိရင်) မြန်မာတွေ မလာပါစေနဲ့လို့ ကိုယ်တိုင်ပဲဆုတောင်းမိပါလိမ့်မယ်။
တိုင်းပြည်မှာ စက်မှုအခြေခံ ထွက်ကုန်မရှိလို့ ရှိတာထုတ်ရောင်းရတယ်ဆိုပေမဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်ဆီးသွားမဲ့ လုပ်ငန်းတွေ၊ ပြန်အစားထိုးဖို့ မဖြစ်နိုင် မလွယ်ကူတဲ့ တွင်းထွက် သယံဇာတတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ အဖက်ဖက်က စဉ်းစားရပါမယ်။ ငွေတခုထဲ ကြည့်လို့မဖြစ်ဘူး။ ငွေရရင်တောင် စီးပွားဖက်က ဘယ်လိုကောင်မျိုးလည်းဆိုတာ ကြည့်ရမယ်။ ရေတိုထက် ရေရှည်ကြည့်ရမယ်။ တရုတ်၊ ကုလားလို ကောင်မျိုးတွေနဲ့ သွားလုပ်နေရင်တော့ ဖင်ပေးရရုံတင်မက ဖင်ပါကျွတ်ဖို့ ရှိတယ်။ ဒင်းတို့ကတော့ ရရင်ယူပါမယ်။ အာဖရိကတိုက်မှာ တရုတ်တွေမွှေလို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးသွားပြီ၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဆိုတာ ပြောမနေနဲ့တော့။ မြန်မာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး လူမှုရေး အမြင်နှိုးကြားဖို့လိုတယ်။ အတိတ်ကို သင်ခန်းစာယူနိုင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ လိမ္မာပါးနပ်စွာနဲ့ မကောင်းတဲ့ အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံများ အရိပ်အောက်ကနေ ရုန်းထွက်နိုင်မှ မြန်မာပြည်အတွက် သာယာဝပြောတဲ့ အနာဂတ်ရှိမယ်…။
“……ချုပ်ဆိုတဲ့ သဘောတူ စာချုပ်တွေကသာ
နဲနဲ ပါးပါး နစ်နာဖို့က မျော်လင့်ပြီးသား ၊ ”
နဲနဲပါးပါးလောက်ပဲနစ်နာဘို့ (သက်သာရာရဘို့) လက်တွေ့အားဖြင့် အခွင့်အရေးမရှိပါဘူး။
ကိုဖေါရင်းပြောထားတဲ့ သုံးချက်လုံး -(ပွင့်လင်း၊ ပွဲစားမ၀င်၊ အဂတိကင်း )
ကျုပ်တို့နိုင်ငံက မျက်စိမှိတ် အနိုင်ကျင့်လို့ရတဲ့ နိုင်ငံအဖြစ်က မလွတ်မြောက်သေးပါဘူး။
ကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးလာလုပ်ကြမှာက အရိယာသူတော်စင်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ စီးပွားရေးသမားတွေပါ။
သူတို့စီးပွားပဲ သူတို့ဂရုစိုက်မှာပါ။ သူတို့စီးပွားအတွက် ရနိုင်သမျှအခွင့်အလမ်းအားလုံး ရအောင်ယူကြမှာပါ။
ကျုပ်တို့ကလဲ သူတို့ကို ငြင်းနိုင်ဘို့နေနေသာသာ – လာအောင်တောင် မနည်းဆွဲဆောင်နေရတာပါ။
အိမ်သုံးစားရိတ်မလောက်လို့ အိမ်တစိတ်တပိုင်းကို အိမ်ငှားတင်ရင် အိမ်ငှားရဲ့ဒါဏ်ကို ခံကြရပါမယ်။
အရေးကြီးတာက လက်ငင်းထမင်းကျွေးမယ့် အိမ်ငှားကို ရန်တွေ့လွှတ်ဘို့ထက်-
ကိုယ့်အိမ်စားရိတ် ကိုယ်နိုင်အောင် နည်းလမ်းရှာပြီး ကြိုးစားကြဘို့ကသာ
ကျုပ်တို့နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေကို လူတိုင်းက ( သမ္မတကအစ ပြာတာအဆုံး) အမှန်အတိုင်းမြင်ဘို့ အရေးကြီးလှပါတယ်။
“..အစိုးရ အဆက်ဆက် ဝါဒဖြန့်ခဲ့တဲ့
သယံဇာတ ပေါကြွယ်ဝတဲ့ ရွှေနိုင်ငံဆိုတာကြီးကိုလည်း….”
ရွှေတွင်း ငွေတွင်း ပယင်း ဒုတ္ထာ ၊ ရတနာခွန်နှစ်လီ…ဆိုပြီး
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရော ပြည်သူကိုပါ သမိုင်းနဲ့ချီပြီးလိမ်ခဲ့တာ…။
တကယ်တော့ သူ့ကိုမှီခိုသုံးစွဲပြီး ချမ်းသာလောက်တဲ့ ဘယ်သယံဇာတမှ မြန်မာပြည်မှာ မထွက်ပါဘူး ။ ရှိလဲရှိမနေပါဘူး။
အဆိုးဆုံးကတော့ သယံဇာတထဲမှာဖြင့် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ “လူ” သယံဇာတအရာမှာ
မြန်မာပြည်သူအများစုဟာ အညံ့စားထဲမှာ ပါနေတာ ကြာလှပါပြီ။ အဲဒါအရေးကြီးပါတယ်။ တယောက်ချင်းက ကိုယ့်အရည်အသွေးကိုယ်မြှင့် ၊ တမိသားစုချင်းက ကိုယ့်မျိုးဆက်ကိုယ်မြှင့်မှ နောင် နှစ်ခြောက်ဆယ်လောက်မှာ (မျိုးဆက်နှစ်ဆက်) သူများနောက်နား ကပ်လိုက်နိုင်မှာ။
ကျုပ်သာ တန်ခိုးရှိရင် – စင်္ကာပူ က နိုင်ငံသားတွေကို ခဏထုတ်ပြီး
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ တမနက်လောက် အစားထိုးပြချင်တယ်။
ဒါမှမဟုတ် တိုကျိုနဲ့ သော်လည်းကောင်း ဆိုးလ် နဲ့သော်လည်းကောင်းပေါ့။
အဘ ရှင်းပြတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်… နိုင်ငံတကာမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု့များကို ဖိတ်ခေါ်သင့်ပါတယ်… ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်အရ ပြိုင်ဆိုင်မှု့က ပြင်းထန်ပါတယ်… မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ Company များ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့ နိုင်ငံတကာ Company တွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရပါမယ်… ဒီနေရာမှာ အစိုးရက ပြည်တွင်း Company တွေကို တစ်ချို့ကိစတွေမှာ နိုင်ငံတကာ တွေထက်ပိုပြီး မျက်နှာသာပေး အလေးပေးရပါ့မယ်… ထိုအတူဘဲ လာရောက်မြှပ်နှံမယ့် Company တွေမှာ လုပ်ကြမဲ့ နိုင်ငံသား အလုပ်သမားတွေ မနစ်နာရအောင် ထိုက်သင့်တဲ့ Labor Law ထုပ်သင့်ပါတယ်… စင်္ကာပူလို နိုင်ငံတောင်မှ သူတို့နိုင်ငံသားနဲ့ တစ်ခြားနိုင်ငံခြားသား အခွင့်အရေး အတူမပေးပါဘူး… Company တွေကို နိုင်ငံခြားသား ဘယ်လောက်ဆိုရင် နိုင်ငံသား ဘယ်လောက် Percent အချိုးကျ ပါဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ Rule ရှိတယ်လို့ ကြားဘူးပါတယ်… အထူးသဖြင့် အောက်ခြေ၀န်ထမ်းမဟုတ်သော အုပ်ချုပ်မှု့ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာ နိုင်ငံသားတွေ အတွေ့အကြုံရအောင်… ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် အမြတ်ကျန်အောင် အဲ့လိုလုပ်ကြတယ်လို့ မြင်ပါတယ်…ကျွန်တော့အမြင်အရပြောတာပါ… မှားရင်လည်းထောက်ပြပါအုံး….
“…ဘာမှမပူနှင့် သိပ်မကြာခင်မှာ ဆင်းရဲလို့ ဆေးမကုနိုင်လို့
သေရတဲ့သူတွေ အောတိုက် အများကြီးကို တွေ့ရဦးမှာ ။”
ဟင်း.. ဟင်း… ဟင်း…
ဒါကတော့ ကက်ပတိန်ကြီး မျက်ခြေပြတ်သွားပြီ….။
သိပ်မကြာခင်မဟုတ်ပါဘူး ကိုဖေါရင်းနှင့်တကွ ရွာသားအပေါင်းတို့ရေ…
အရင်ကရော အခုလက်ငင်းပါ သေနေကြသူအများစုဟာ
ဆင်းရဲလို့ ဆေးမကုနိုင်လို့ (သင့်တော်တဲ့ကုသမှု့ကိုမရလို့) သေနေကြတာပါဗျာ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို မဟာဆင်းရဲသားကြီးလို့ ခံစားရပါတယ်။
သူများက စာနဲ့ပေနဲ့ အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ တရားချတာလဲ သိပ်နားမ၀င်ပါဘူး။
“ကျန်တာနောက်မှကြည့်ရှင်း….. မြန်မြန်ဆင်းရဲက လွတ်ဘို့ အဓိက ” လို့ပဲ-
အဘဖောပြောတဲ့..”အဲဒီတော့ကာ ငမွဲတိုင်းပြည်ကြီး အမြန်ဆုံး ဖွံဖြိုးတိုးတက်ဖို့က
ငွေ ( ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ) လိုတယ် ။ ဖိတ်ခေါ် ကြိုဆိုရမယ် ။ ”
၀င်လာကြမယ်ဆိုအရမ်းကောင်းပေါ့ဗျာ.အဲဒီ ပိုက်ဆံမရှိ.နည်းပညာမကျွမ်းကျင် ခြွတ်ခြုံကျ..တိုင်းပြည်အပေါ်ကို
တရားဝင် ၀င်လာပြီးမြုပ်နှံလာနိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေ ပေးထားပါရက် ငွေကိုသုံးပြီးအောက်လမ်းနည်းနဲ့ဝင်ချင်တဲ့
လူစားတွေများနေရင်တော့ ငါတို့ကအသုံးမကျတာပဲခံရမှာပဲဆိုနေရင်တော့ လူတွေထိုးဆပ်တောင်လောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်..
ဘေးကနေ မယောင်မလည်နဲ့ နားစွင့်နေမယ်………..
ကျုပ်က လူကြီးတလှည့် ၊ ကလေးတလှည့်…..
အဘိုး အရမ်း ဝမ်းနည်းလာမိဘီကွယ်
တော်ဘီ..ဒီည ဆီဒိုးနားမှာ သွားအိပ်တော့မယ်
“ဘယ်သယံဇာတကများ ဆော်ဒီ၊ဘရူနိုင်း၊ဩစီ၊နော်ဝေ တို့လို တိုင်သူပြည်သား သန်း(၆၀)လောက်ကို မှီခို စားနိုင်အောင်ထွက်လို့…ဘယ်မှာလောက်လောက်လားလား ထွက်လို့လည်း ဟိုဟာ တို့စိတို့စိ ဒီဟာ တို့စိတိုစိ”
ကျနော်ဖတ်ဖူးတာများမှားနေလား စာရေးတဲ့သူများမှာလားတော့ မပြောတတ်ပါ…မိုးကုတ်မြို့ကထွက်တဲ့ ပတ္တားမြားငမောက်ကြီး ဘယ်လောက်တန်ပါသလဲ….ဦးခင်ညွန့်လက်ထက်က ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးကို ယခုဗီယက်နန်က ဘုရားဆင်းတုတော်ထုတယ်…ဘယ်လောက်တန်ပြီး ဘယ်လောက်ရလိုက်သလဲ..
မိုးကုတ်မြို့ကို ယနေ့ကာလပေါက်ဈေးနဲ့တွက်လို့ရပါသလား….ယခုမြန်မာပြည်မှာတွေရှိတဲ့ ရွှေကြောဟာ နောင်အနှစ်(၁၀၀)ကျော်ထိထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်…
မြန်မာ့ကျွန်းသစ်တွေနေ့စဉ် ၁၀ ဘီးကားကြီးတွေနဲ့ တရုတ်ပြည်ကိုသယ်ထုတ်နေတာကို ကိုယ်တိုင်မြင်ဖူးခဲ့တယ်…
ဘီအိုစီ ကုပ္မဏီတွေဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ ရေနံချောင်း၊ချောက်ကရေနံတွင်းတွေကို ဆက်ပြီးထုတ်လို့မရအောင် ပိတ်ပစ်ခဲ့တာမဟုတ်လား…
အဲဒီတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့သံယံဇာတက တိုစိတို့စိလား နည်းပညာအားနည်းလို့ မထုတ်လုပ်နိုင်တာလား။
ယခုကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတွေရှိတဲ့ ရွှေကြောဟာလည်း အမေရိကန်ဘူမိဗေဒဂြိုလ်တု အကူအညီနဲ့တွေရှိခဲ့တာမဟုတ်လား…
ကိုခိုင်ရေ…မလေးမှာ ယူအင်သမားတွေ ရိုက်မူ၊ဘိန်းရောင်းမူ၊ပြန်ပေးစွဲမူ၊လူသတ်မူ၊လက်နက်မူ အမလေးဆက်မရေးနိုင်တော့ဘူး များလွန်းလွန်းလို့…
အမျိုးသမီးအချင်းချင်း တူနဲ့တောင်ထုရိုက်တယ်ဆိုတော့ အကြောင်းတွေတော့ရှိမှာပေါ့လေ…
စားသောက်ဆိုင်ထဲထိဝင်ရောက်ရိုက်နှက်တယ်ဆိုတော့…အင်း…အခုတလောမလေး သတင်းစာထဲမှာပါလာတဲ့ မူခင်းသတင်းဆိုရင် မြန်မာနဲ့ကိုမကင်းဘူးဖြစ်နေပြီ…
အဘပြောတာအမှန်များတယ် တစိမ့်စိမ့်တွေးလေ ပိုပိုမှန်လေပဲ
စွမ်းအင် ကျောက်မျက် ဓာတ်ငွေ့ သစ် စတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆိုင်တဲ့စီးပွား
ကို FR ကြီးက အမှန်တွေကိုတွေးခိုင်းပြီးရေးပြနေလေတော့ဆဲသူဘဲ အပြစ်ဖြစ်မှာပေါ့။
ပိုက်ဆံမရှိတဲ့ ငမွဲ ၊ နည်းပညာမတတ်တဲ့ ငဖျင်း ၊ နိုင်ငံက နိုင်ငံသားလေး ၊ အဘရယ် စာသားတွေကမိုက် တယ်နော်
ခုတော့ ခင်ဗျားတို့ ဗိုက်ဝလို့ မီးသတ်သံချောင်းခေါက်နေကြတယ်လား
( မီးလောင်ရင် သံချောင်းတီး လောင်ရင်တီး )
ငါ့ ( လား ) နင့် ( လား ) အားလုံး( လား ) ဘဲကွာ
သမ္မတကြီး အန်ကယ်သိန်းစိန် ကို အားနာတယ်
တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ ဖြစ်လာပါပြီ . . . . . နိူင်ငံကြိးလေ